Wasaarada Amniga Soomaaliya oo soo bandhigtay dhacdadii ka dhacday degmada Xamar Weyne – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 22/03/2019 ] Shir looga hadlayo Islaam nacaybka oo Maanta ka furmaya Dalka Turkiga	Arimaha Bulshada
[ 22/03/2019 ] Guddoomiyaha Degmada Marka oo Shacabka ka codsaday in ay ka qeybqaataan Amniga magaalada	Arimaha Bulshada
[ 22/03/2019 ] Muslimiintii lagu laayay New Zealand oo Maanta la aasay	Arimaha Bulshada
[ 21/03/2019 ] AKHRISO:- Golaha wasiirada xukumada Soomaaliya oo magaca ka badalay Hay’adda Sadaasha Hawada	Arimaha Bulshada
[ 21/03/2019 ] Eng Maxamed Cabdi Kaariye oo Qarax gaari lagu dilay magaalada Muqdisho	Arimaha Bulshada
HomeWararka SoomaaliaWasaarada Amniga Soomaaliya oo soo bandhigtay dhacdadii ka dhacday degmada Xamar Weyne
Wasaarada Amniga Soomaaliya oo soo bandhigtay dhacdadii ka dhacday degmada Xamar Weyne
01/10/2017 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Oct 01, 2017:- Wasiirka Amniga Gudaha ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa soo bandhigay baaritaankii Saraakiisha Booliska ku hayeen dhacdadii Axadii la soo dhaafay ka dhacday degmada Xamar Weyne,kooxo watay gaari ay ku rasaaseeyeen gaari kale oo ay wateen masuliyiin.
Wasiirka Amniga oo ka hadlayay Xarunta Jen. Kaahiye ayaa sheegay baaritaanka kiiskan ay iska kaashadeen Wasaaradda Amniga iyo Taliska Booliska, isagoo xusay in gacanta lagu dhigay ninka laga shakisan yahay iyo gaarigii lagu fuliyay weerarkaas oo baaritaan lagu haayo.
“Waxaa la hayaa cadeymo furo u noqon kara kiiska, dib ayaa laga soo sheegi doonaa marka uu baaritaanka soo dhamaado, gaariga uu ninka watay baaritaan dheeraad ayaa ku socdo”ayuu yiri Wasiirka Amniga Soomaaliya.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in xabsiga la dhigay Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida degmada Xamar weyne oo lagu eedeeyay xil gudasho la’aan iyo dayac.
“Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida ee degmada Xamar weyne xabsiga ayaa la dhigay, xilalkana waa laga qaadaty, sidoo kale waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labo isgoys oo midna weerarka ka dhacay, midna ku dhowaa, waxaa ku raad-joognaa askar kale oo ku qorneyd labada Isgoys”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabo laga qaadi doono Taliyeyaasha iyo askartii dayacday shaqadii loo xil saaray ma ka gabaiyay waajibaadkooda.
“Waxaa baaritaanka kiiskan u xil saarnay Guddi ka tirsan Taliska Booliska, sida ugu dhaqsiyaha badan halagu soo gaba gabeeyo, dambiilayaasha lagu horkeeno cadaalada, waxaa jiri doono isla xisaabtan iyo dabagal lagu hubin doono shaqada iyo howlaha ciidamada ammaanka, mana jiri doono mas’uul aan gudan waajibaadkiisa oo xil sii heyn doono”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Natiijada baaritaanka uu soo bandhigay Wasiirka Amniga ayaa noqonaya kiiskii ugu weynaa ee sida wadajir ah ay baaritaankooda uga qeyb qaataan Wasaaradda Amniga iyo Taliska Booliska, iyadoo tan iyo maalintii Khamiistii, markii uu Wasiirku soo saaray amarka, ayaa waxaa socday baaritaano aan kala go’ laheyn.
Dhacdadii todobaadkii hore ka dhacday degmada Xamar weyne ayaa su’aal badan iyo shaki kala duwan dhalisay, markii rag hubeysan oo gaari wadatay ay weerar ka geysteen Xamar weyne, iyadoo halka weerarka ka dhacay ay ka ag-dhowaayeen ciidamada dowlada Soomaaliya.
AKHRISO:- Maamulka Galmudug oo Warsaxafadeed soo saaray iyo Beesha Caalamka oo baaq udireen
Akhriso:- Madaxweynaha maamulka galmudug oo xalad deg deg ah ku dhawaaqay
DAAWO SAWIRO:- Doorasho xiiso leh oo ka dhacday magaalada Beledweyne
Hiiraan Xog, Doorasho siweyn isha loogu wada hayay islamarkaana ay ku tartameen sadax musharax ayaa ugu dan-beyntii lagu doortay galinkii danbe ee shalay guddoomiyaha Olombikada gobolka Hiiraan oo noqday Cali Maxamed Cabdi Raaxooy (Cali Shaal) [...]
DAAWO SAWIRO:- Gudiga doorashada Olombikada gobolka Hiiraan oo shahadooyinka doorashada gudoonsiyay musharaxiinta
Hiiraan Xog, Gudiga Doorashada Olombikada gobolka Hiiraan ayaa manta gudoonsiiyay musharaxiinta u tqagan xilka gudoomiyaha Olombikada gobolka Hiiraan shahaadiiyinkii ay ugu qeyb gali lahaayen doorashada dhawaan ka dhici doonto magaalada Beledweyne. Musharaxiinta manta la gudoonsiiyay [...]
AKHRISO:- Gudomiyahii Hore ee Olompic Gobolka Hiiraan Saadaq Cumar Carte ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo doorashada
Hiiraan Xog, Gudomiyahii Hore ee Olompic Gobolka Hiiraan Saadaq Cumar Carte ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo doorashada la filayo in ay ka dhacdo magaalada Beledweyne. ”Waxaan Aad U so dhameynaa In manta Lagu Tartamo [...]
DAAWO VIDEO:- Gudiga Doorashada Olobikada gobolka Hiiraan oo shiir jaraaid ku qabtay magaalada Beledweyne
Hiiraan Xog, Gudiga Doorashada Olobikada gobolka Hiiraan oo manta Shiir jaraaid ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay xiliga kama dabeeysta ah ee la dooranayo gudoomiyaha cusub ee Olobikada gobolka Hiiraan. Gudiga ayaa sheegay in [...]
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiya oo iibsanayo kooxda Manchester United
Hiiraan Xog, Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa war ka soo saartay hadal in muddo ah la isla dhex marayay oo ku saabsan in dhaxal sugaha boqortooyada, Maxamed Bin Salmaan uu doonayo inuu iibsado kooxda Manchester United [...]